एमसीसी सम्झौताको तथ्यहीन आलोचना र यथार्थ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
एमसीसी सम्झौताको तथ्यहीन आलोचना र यथार्थ
२०७६ पुष १४, सोमबार ११:०७ गते
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपालले इतिहासमै अमेरिकाबाट प्राप्त गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो सहायता कार्यान्वयनमा आउनै लाग्दा जबर्जस्त विवादमा पार्न खोजिएको छ । सरकारकै मन्त्रीहरु तथा अमेरिकी अधिकारीहरुको यथार्थ बुझाउने हरेक प्रयत्नको बेवास्ता गर्दै संशयपूर्ण ढंगबाट सम्झौतामा रहेका केही प्रावधानलाई झिकेर विषयान्तरण गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर तथा नेपालले लिनसक्ने अधिकतम लाभलाई हेरेर नभई एमसीसीबारे वास्तविकताभन्दा टाढा पुगी आशंकाकै भरमा विवाद चर्काइरहिएको छ । ती नेताहरु नेपालमा बाह्य सहयोग र अनुदान खासगरी अमेरिका र उसका साझेदारबारे बेखबर पक्कै छैनन्, तर किन उनीहरु यो परियोजनालाई भ्रमको अस्त्र बनाइरहेका छन् भन्ने विषय रहस्यमय छ । यसले गर्दा हचुवाको भरमा अमेरिकाविरोधी भाव कसैको उक्साहटमा त भइरहेको छैन ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले कुनै खोक्रो व्यक्तिवादी सिद्धान्तको बहसका लागि कुनै पार्टीसँग गरेको अपारदर्शी सम्झौता होइन । यो त एक दशकसम्मको नेपालले नै गरिरहेको प्रयत्न, खुला तथा पारदर्शी छलफल, अनुसन्धान र गम्भीर वार्ताहरुको परिणामस्वरुप आउन लागेको अनुदान हो । अमेरिकी खुला हृदयको सहायतालाई अहिले आएर उसले एकपक्षीय र उसैले जबर्जस्त लादेजस्तो देखाउने गरी भ्रामक प्रचारबाजीमा उत्रने नेताहरुले बिनापूर्वाग्रह नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, अमेरिकी समग्र अनुदान र सहायता, कूटनीतिक संवेदनशीलता र नेपालको जिम्मेवारीबारे सोच्नैपर्छ । अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ, सामरिक अभिरूचि तथा आफ्नो प्रभुत्व देखाउन नेपालमा सहायता गरेको होइन । एमसीसी नेपालकै आग्रहमा नेपालको समृद्धिका लागि अमेरिकाले अनुदान दिएको हो ।
एमसीसी सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले पारित गरेको विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न विभिन्न मुलुकहरुमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने एक स्वतन्त्र विदेशी सहायता एजेन्सी हो, जसले सहायता दिने भौतिक पूर्वाधार र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सहायता गर्दछ । यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अमेरिकी विदेशमन्त्री रहेका छन् भने सदस्यहरुमा अर्थमन्त्री, युएसआइडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चार जना सदस्य रहेका छन् ।
एमसीसी अमेरिकाले जबर्जस्त लादेको परियोजना होइन, बरू यो अमेरिकाको ठूलो अनुदान हो जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लाभ दिने उद्देश्य राखेको छ । वर्षौसम्मको सघन छलफलपछि नेपालले विसं २०७४ भदौ २९ गते वासिङ्टनमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि चरणबद्धरुपमा एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ भने यसमा रहेका सर्तहरु पनि पूरा गरिरहेको छ । एमसीसीको कम्प्याक्ट अनुदान पाउन नेपालले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको थियो । सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकका लागि लगानीसम्बन्धी एमसीसीको मापदण्डमा नेपाल सफल भइसकेपछिमात्रै नेपाललाई उक्त अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो । एमसीसी २७ देशमा छ । १७ वटा देशमा एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको र १० वटा देशमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
यसको कार्यान्वयनका लागि २०७५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को गठनादेशबाट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको गठन भइसकेको छ । यसले एमसीए कार्यान्वयनका लागि नेपाली एजेन्सीका रुपमा काम गर्नेछ । एमसीसीबाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग अनुदान र नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानीलाई यही निकायले कार्यान्वयन गर्नेछ । छनोटमा परेका दुई आयोजना (विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत) कार्यान्वयन गर्नु एमसीएको काम हो । यसको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष छन् भने जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुन्छन् । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित निजी क्षेत्रबाट एक प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजबाट एक प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् ।
राम्रा नीति, सम्बन्धित मुलुकहरुको स्वामित्वसहित नतिजाकेन्द्रित भएर वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने एमसीसीको लक्ष्य देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन, गरिबी न्यूनीकरण र संस्थाहरुको सुदृढीकरणका लागि निश्चित समयका लागि एमसीसीले अनुदान सहयोग गर्छ । नेपालसहित २७ देशमा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये १७ मुलुकमा परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा छन् । एमसीसीले विश्वभर ‘कम्प्याक्ट एन्ड थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सुशासन, शिक्षा, ऊर्जा, उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, यातायात पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत क्षेत्रमा १३ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग दिइसकेको छ ।
योजनाअनुसार काम भए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन १६ असार ०७७ देखि हुनेछ, तर कार्यान्वयन थालनीका लागि पूरा गर्नुपर्ने ६ पूर्वसर्तहरु छन् । तीमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणका सम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार पूर्वसर्तहरु पूरा भइसकेका छन् । अब पूरा हुन बाँकी दुई पूर्वसर्तहरु छन् । पहिलो– कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन र दोस्रो– आयोजना क्षेत्रमा पहुँच । तर, करिब ९ वर्षको तयारीसहित कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको एमसीसीबारे सत्तारुढ दलको नेतृत्व तहमै अहिले देखिएको विवाद हेर्दा यसको समाधान सहज देखिन्न ।
युएसएआइडीको भन्दा पनि फरक ढंगले काम गरेर जुन वैदेशिक सहायता क्षेत्रमै कोशेढुंगा सावित होस् भनेर एमसीसीको सुरूवात भएको हो । अनुदानका लागि तीनवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो, आफ्नै जनतामा लगानी गरेका छन् कि छैनन् । स्वास्थ्य, शिक्षामा कति खर्च गरेको छ ? प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु जोगाएका छन् कि छैनन् ? बालबालिकालाई नियमित खोप दिएको छ÷छैन ? शिशु स्वास्थ्यको अवस्था के छ ? बालिकाहरुले प्राथमिक तह पार गरेका छन् कि छैनन् ?
दोस्रो, आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ ? उद्योग व्यवसाय गर्ने बन्देजहरु छन् कि छैनन् ? आर्थिक खुल्लापन र स्वतन्त्रता छ कि छैन ? वित्तीय नीति, मुद्रास्फीति, नियमनको गुणस्तर, आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरुको सहभागिता, भूमिमाथिको हक र पहुँच एवं बिजनेस स्टार्टअप गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन ? भन्नेलगायतका आठवटा सूचकहरु बनाएर मूल्याङ्कन गर्ने हो । तेस्रो, विधिको शासन । शासनव्यवस्था विधिको शासनअनुसार चलेको छ कि छैन ?
राजनीतिक अधिकार कस्तो छ, सूचनाको हक, मौलिक हकको अवस्था के छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण छ कि छैन, सरकार प्रभावकारी छ कि छैन भन्नेलगायतका सूचक हेरिसकेपछिमात्रै पैसा हाल्छन् । एमसीसीअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायता विद्युत् पूर्वाधार र सडक पूर्वाधारमा खर्च हुने निश्चित भइसकेको छ । एमसीसीअन्तर्गतको सहायता निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नका लागि विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा भएको हुनुपर्ने हुन्छ । एमसीसीको कुरा गरिरहँदा बिर्सन नहुने अर्को कुरा के हो भने यो ऋण होइन, अनुदान हो । ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ) को अनुदान भनेको नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म आएको छैन ।
चीनले यहाँ आएर के गरिरहेको छ भन्नेमा अमेरिकालाई चासो पक्कै छ । चीन पनि एमसीसीप्रति संशकित नभएको होइन । नेपालमा यतिबेला चिनियाँ चासो पनि बढेको छ । चिनियाँ चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जमात र एमसीसीको अनुदान लिँदा भारत तथा अमेरिकाको पोल्टामा नेपाल जान्छ भन्ने मान्यताबीचको जुहारीमा अहिले नेपाल पेलिएको छ । नेपाललाई निःसन्देह विकास चाहिएको छ । सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ । यो नारा पूरा गर्न ठूलो धनराशि आवश्यक पर्छ । दाताले दिन खोजेको यो रकम लिँदा नेपाललाई बेफाइदा हुने केही पनि हैन, मात्र नेपालले सुशासन, पारदर्शिताजस्ता केही सर्तहरु पालना गर्नुपर्छ ।
ठूला परियोजनामा खर्च हुने रकम भएको र ती परियोजना दीर्घकालीन एवं क्षेत्रीयरुपले पनि मह¤वपूर्ण भएकाले त्यसमा छिमेकीको चासो पनि सम्बोधन होस् भन्ने नाजायज पनि होइन । तर दुर्भाग्य ! यो परियोजनालाई बढी राजनीतीकरण गरियो । नेपाल सामरिकरुपले अन्त्यन्त संवेदनशील ठाउँमा छ । संवदेनशील भएकैले यहाँ चिनियाँ, भारतीय वा अमेरिकी चासो बढेकोमा कुनै सन्देह छैन । तर, नेपालले यी र यस्ता चासोहरुलाई आफ्नो कूटनीतिक क्षमताले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
बाहिर दन्तबझान गरेर उनीहरुलाई बिच्क्याउनेभन्दा आफ्नो हित र अडान के हो प्रस्ट पार्नुपर्छ । यो संवेदनशील विषयमा सत्तारुढ पार्र्टीिभत्र देखिएको खिचातानीले दुर्घटना निम्त्याउने खतरा बढेको छ । संसद्बाट यो परियोजना पारित गराएर विकासको मार्गमा जान छाडेर आफूअनुकूलको राजनीति गर्ने हो भने नेपालले एउटा राम्रो अवसर गुमाउन सक्छ । अरूण तेस्रो परियोजना गुमाएर नेपाल एकपटक विकासमा धेरै पछि परिसकेको छ । एमसीसीमा त्यो नदेखियोस् र यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनोस्, भलाइ यसैमा छ ।
एमसीसी आफैँमा विभिन्न दातृ निकायले दिने अनुदान कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रममा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेमा अहिले बहस थालिएको हो । यो कार्यक्रममार्फत नेपाललाई करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान आउँदैछ । अनुदान दिनेमध्ये सबैभन्दा ठूलो दाता अमेरिका नै हो । अमेरिकाले अहिले यो क्षेत्रमा इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअनुसार काम गरेको छ ।
अनुदानका लागि अघि सारिएका सर्तहरु पनि इन्डोप्यासेफिक रणनीतिकै अंकहरु हुन् र अनुदान स्वीकार्नासाथ नेपाल अमेरिकी पोल्टामा जान्छ भन्ने तर्क एकथरीको छ भने अनुदानका निश्चित सर्तहरु पूरा गर्नु अनुदान दिने तथा लिने दुवैको दायित्व हो भन्नेहरु अर्काथरी रहेका छन् । हरेक विषयमा खुला छलफल गर्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर, अहिले अमेरिकी अनुदानमा राजनीति घुसाइएको छ । स्वतन्त्र र तथ्यगत बहसले नै हरेक राजनीतिक दलको आन्तरिक निर्णयलाई मजबुत बनाउँछ ।
एमसीसीजस्तो विकासमूलक परियोजनालाई यो या त्यो बहानामा कसैको उक्साहटमा राजनीतिक विवादको विषय बनाउनुले मुलुकको समृद्धि हासिल हुँदैन । केही सर्त र प्रावधानहरुमा अहिले कार्यान्वयनको चरणमा आएर आशंका गर्दै अमेरिकी सहायतालाई विवादित बनाउनुले राष्ट्रिय हित हुँदैन । अमेरिकी सहायताले नेपालको विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।
अनुदानले झन्डै ४५ अर्ब रूपैयाँबराबरको विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गरी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइनबाट भारतमा नेपालको विद्युत् बेच्ने बाटो खुल्नेछ भने बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य पूर्वाधारमा हुने खर्चले समृद्ध नेपालको विकासयात्रामा एउटा ठूलो कोशेढुंगा हुनेछ । सम्झौता लागू भएको पाँच वर्र्षिभत्र अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ नेपाललाई अनुदान दिनेछ । नेपाल सरकारले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्दै पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्दै सक्रिय साझेदारिता देखाउँदा विकासमा नेपालको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ । यो परियोजनाले नेपालको अन्तर्र्रािष्ट्रय छवि र लगानीको वातावरणमा ठूलो फड्को मार्नेछ । अमेरिकी लगानीमा विश्वास भित्रिने र त्यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मा ढाल्न सक्दा अमेरिका र उसका साझेदार देशहरुबाट ठूलो लगानी भित्रिने छ । विकास परियोजनामा संशय उत्पन्न गराउन खोज्ने हो भने नेपालमा ठूलो वैदेशिक लगानीको आशामाथि कुठाराघात हुनेछ ।
सरकारले यही वर्ष असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्को सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेको तथा सरकारले अमेरिकालाई गराएको विश्वसनीयतालाई ख्याल गर्दै एमसीसी सम्झौता तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयन गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । तत्कालै प्रयोगमा जानुपर्ने र परिपक्व भइसकेको यो सम्झौता प्रस्ताव अब ढिला नगरी संसद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।